The Art of Living | ကိုသင်ကာ . . . . Ko Thinker
← In…dar view !!!
Interview with Lawka AHla Online Magazine →
0 responses to “The Art of Living”
သင်နဲ့ ကာနဲ့ ရှင်သန်ခဲ့သည် ဆိုပြီး ရေးပါလား ကိုသင်ကာရဲ့
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ နှစ်သစ် မင်္ဂလာပါဗျာ…
မှန်းပြီး ဟိုဖတ်ဒီဖတ်ဖတ်သွားတယ်။ ရခိုင်စာလိုဘဲမြင်ရတယ်။
့happy new year.
unicode ကနေ zaw gi ကို ပြောင်းဖတ်လို့ရတဲ့ software မရှိဘူးလား။ translator လိုမျိူး။။ ဥပမာ…
ဘလော့ဂ်မှာ အရင်တုန်းက ဖောင့်ပြောင်း ဖတ်နိုင်တဲ့ ကွန်ဗက်တာ ဘောက်စ်မျိုးက WordPress မှာ တန်းပလိပ် ပြင်မရတော့ ထည့်မရလို့။
ပြောင်းဖတ်လို့ရတဲ့ကွန်ဗက်တာတွေ ရှိတယ် အစ်မခင်ဦးမေရေ။ ဒါပေမယ့် အစ်မ အလုပ်ရှုပ်မယ်ထင်တယ်။
ဆိုဒ်ဘားမှာ ကွန်ဗက်တာ လင့်ခ်တွေ ပြထားပါတယ်။
Font Converter ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ကြည့်ပါဗျာ။
ကဗြာလေးအားပေးသှားပါတယျဗြာ။ ကောငျးတယျ။ တဈခါတညျးလာပွီးတော့ လကျတို့ခဲ့ပါတယျ။